बागलुङका बिभिन्न खेल मैदान र पर्यटनमा मन्त्रालयगत बजेट::Online News Portal from State No. 4
बागलुङका बिभिन्न खेल मैदान र पर्यटनमा मन्त्रालयगत बजेट
बाङ्गेचौर, दुर्लिबेशी, उत्तरगंगामा कवर्ड हल, जैमिनी, भैरव र पञ्चकोटलाई बजेट
बागलुङ, १ असार– केन्द्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत बागलुङमा ६ वटा खेल तथा २ वटा धार्मिक पर्यटकीय स्थानका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । जैमनी तथा भैरवस्थानलाई धार्मिक पर्टटनको रुपमा विकास गर्नको लागि २० लाख रुपैयाँ र पञ्चकोटको गुरुयोजना अनुसारको कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रलयले तिनवटै धार्मिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थानको रुपमा विकास गर्नको लागि बजेट बिनियोजन गरेको सांसद डा. सुर्य पाठकले बताए ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रलयले जिल्लाका छ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बाङ्गेचौर रंगशाला निर्माणको लागि २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छभने बाङ्गेचौरमा कवर्ड हल निर्माणको लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको सांसद पाठकले जानकारी दिए । जैमिनी नगरपालिकामा रहेको दुर्लेवेशी खेल मैदानमा कवर्ड हल निर्माणको लागि २० लाख बिनियोजन भएको छभने बानपाको उपल्लाचौर खेल मैदान निर्माणको लागि १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । काठेखोला गाउँपालिकाको रेशमा खेल मैदान निर्माणको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ढोरपाटनको उत्तरगंगा बहुद्देश्यीय कवर्ड हल निर्माणको लागि १० लाख रुपैयाँ र ग्वालीचौरमा खेल मैदान निर्माणको लागि दश लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको संसद पाठकले जानकारी दिए । ढोरपाटन शिकार आरक्षमा हाईअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणको लागि ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । सांसदमा चलिरहेको बिनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बागलुङका लागि विनियोजन भएको बजेटको बिषयमा जानकारी गराईएको थियो । बजेट भाषणमा सबै कुरा समाबेश नभएको भएपनि मन्त्रालयगत हिसाबमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि बजेट बिनियोजन भएको पाठकले बताए ।